“Training in Project Management for CLMV Officers” held in Nay Pyi Taw – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
“Training in Project Management for CLMV Officers” held in Nay Pyi Taw
THE opening ceremony of the “Training in Project Management for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV) Officers” was held yesterday at the Park Royal Hotel, Nay Pyi Taw.
At the opening ceremony, U Min Lwin, Myanmar Permanent Representative to ASEAN, delivered welcoming remarks followed by opening remarks by Mr. Kazuo Sunaga, Japanese Ambassador to ASEAN. At the ceremony,akeynote address was given by U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs. Present at the opening ceremony were senior officials from the Government of Myanmar, representatives from the ASEAN Secretariat and training participants from Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam.
In the evening, U Hau Khan Sum, Director-General of ASEAN Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs hosted the Welcome Dinner to the guests and training participants. The training program was jointly organized by the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar and Permanent Mission of Myanmar to ASEAN with the support of Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) under the Initiative for ASEAN Integration (IAI). The program aims to enhance the skills of officials from the CLMV Countries in project cycle management through lectures, practical and sharing sessions, case studies and group work/exercise. A total of 55 participants; 25 representatives from different Ministries of Myanmar and 30 representatives from Cambodia, Lao PDR and Viet Nam are taking part in the three-day training.
ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အစိုးရအရာထမ်းများအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲအဆိုပြုရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသင်တန်း နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပ
(၁၂-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အာဆီယံပေါင်းစည်းရေးဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အစိုးရအရာထမ်းများအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲအဆိုပြုရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းလွင်၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး Kazuo Sunaga နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူတို့က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စကား အသီးသီးပြောကြားခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ သင်တန်းသားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းနေ့ညနေပိုင်းတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်းက ဧည့်သည်တော်များနှင့် သင်တန်းသားများကို ညစာဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအဖွဲ့ရုံးနှင့် အာဆီယံ-ဂျပန် ပေါင်းစည်ရေး ရန်ပုံငွေအစီအစဉ်တို့က ပူးတွဲကြီးမှူးကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းသည် သင်ခန်းစာများ၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အပြန်အလှန်ကျွမ်းကျင်မှု ဖလှယ်ခြင်း၊ လေ့လာမှုများနှင့် အုပ်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အစိုးရအရာထမ်းများ၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲအဆိုပြုရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ (၃) ရက်ကြာကျင်းပမည့် အဆိုပါသင်တန်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂၅) ဦး၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အစိုးရအရာထမ်း (၃၀) ဦး၊ စုစုပေါင်းသင်တန်းသား ကိုယ်စားလှယ် (၅၅) ဦး တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။